ဝေဝေသုံးတဲ့ သုံးလခံထိုးဆေးနည်းလမ်း | သိလိုရာမေး
ဒေါက်တာဒိအားမေးရန်	: ဝေဝေသုံးတဲ့ သုံးလခံထိုးဆေးနည်းလမ်း
ဒီနေ့ကလဲ တနင်္ဂနွေနေ့ ပိတ်ရက်ဖြစ်တဲ့အပြင် အိမ်တွင်းအောင်းနေရချိန်လဲ ဖြစ်တော့ ကျွန်မလဲ အိမ်အလုပ်တွေ ပါးနေတာနဲ့ သူငယ်ချင်းဖြစ်တဲ့ မူယာဆီ ဖုန်းလှမ်းဆက်လိုက်တာပေါ့။
ဝေဝေ။ ။ ဟယ်လို မိန်းမရေ… ဘာလုပ်နေလဲဟေ? နေကောင်းတယ်နော်… မတွေ့ရတာကြာပီ..
မူယာ။ ။ ဟယ်ကောင်မ ပျောက်နေတာ ကြည့်စမ်း! အခုမှပဲ ငါ့ဆီဖုန်းဆက်တော့တယ်…
ဝေဝေ။ ။ အေးဟာ! ငါလဲ အိမ်မှာ Work From Home လုပ်နေရတာက တဖက်၊ ပြီးတော့ အိမ်အလုပ်ကလဲ လုပ်ရသေး၊ သားသားကိုလဲ တဖက်က ထိန်းရသေးနဲ့ ငါလဲ တော်တော် busy နေတာဟ! နင့်ကိုလဲ သတိရပါတယ်ဟယ်… နင်ရော လုပ်ငန်းကိုင်ငန်း အဆင်ပြေတယ်မလား?
မူယာ။ ။ အလုပ်ကတော့ အဆင်ပြေပါတယ်ဟယ်… ငါလဲ နင့်လိုပဲ Work from Home ဆိုတော့… ပြီးတော့ အိမ်မှာက ငါရယ်ကိုကိုရယ်ပဲဆိုတော့ လူလေးက နှစ်ယောက်တပိုင်းပဲဆိုတော့ နင့်လိုတော့ ကသီလင်တမနိုင်ဘူးလေ…ဟဲဟဲ…
ဝေဝေ။ ။ အံမယ် နောက်ဆို လူကတိုးလာတော့မှာ… ခု သိပ်ပြီး အပြောကောင်းမနေနဲ့ ကောင်မရေ…
မူယာ။ ။ အေးဟယ်… နင်ပြောလို့ လူတိုးလာမယ်ဆိုကာမှ ငါနင့်ကို တစ်ခု မေးစရာရှိလို့ မိန်းမရေ… နင်က ငါ့ထက် အိမ်ထောင်ကျတာ စောပြီး စီနီယာကြီးဆိုတော့… ငါ သားဆက်ခြားတာနဲ့ ပတ်သက်လို့ မေးချင်လို့ဟ…
ဝေဝေ။ ။ အင်း မေးလေ…
မူယာ။ ။ ဒီလိုဟ… ငါတို့ လင်မယားက အိမ်ထောင်သက်လဲ သိပ်မကြာသေးတာမို့လို့ ခုလောလောဆယ်တော့ နေ့စဉ်သောက်ဆေးပဲ သောက်ဖြစ်နေတာ ၂လလောက်တော့ ရှိပြီပေါ့ဟာ။ ဒါပေမယ့် ပြဿနာက နင်သိတဲ့အတိုင်း ငါဆိုတာကလဲ ရှပ်ပြာရှပ်ပြာဆိုတော့ မေ့ပြီး ဆေးမသောက်မိတာကလဲ အကြိမ်ကြိမ်… နေ့စဉ်သောက်ဆေးဆိုတာကလဲ နင်သိတဲ့အတိုင်း နေ့တိုင်း အချိန်မှန်မှန် မမေ့မလျော့သောက်မှ စိတ်ချရတာဆိုတော့… အဲ့တာ အခု ဆေးသောက်ဖို့ မမေ့အောင် Alarm ပေးတာတို့… ကိုကို ကို သတိပေးခိုင်းတာတို့ပဲ လုပ်နေရတယ်ပေါ့ဟာ။ ဒါပေမယ့်လဲ ကြာရင် ငါနဲ့ ဒီနည်းလမ်းက မကိုက်တော့ဘူး ထင်လို့… ခုချိန်က အိမ်တွင်းအောင်းနေရတဲ့ကာလဆိုတော့လဲ နင်ဖုန်းဆက်တုန်းလေး နောက်ပိုင်းမှာ ငါသုံးလို့ရပြီး အဆင်ပြေလောက်မယ့် တားနည်းကို ကြိုမေးထားကြည့်ချင်တာဟ…
ဝေဝေ။ ။ အေး အဲ့လိုမေ့တတ်ရင်တော့ ရှော့ခ်ရှိတယ်နော်… ဒါမျိုးက အခန့်မသင့်ရင် ကိုယ်ဝန်ရသွားနိုင်တယ်။ ငါကတော့ နင့်လို ကြင်စဦးတုန်းက ကိုယ်ဝန်တားဖို့ကို လေဒီယာရဲ့ အန်ဒလန် (Lydia Andalan) သားဆက်ခြားထိုးဆေးပဲ သုံးတာဟ။ သူက အလုပ်ရှုပ်ပြီး ဆေးသောက်ရမှာ အဆင်မပြေတဲ့ အမျိုးသမီးတွေနဲ့တော့ အကိုက်ပဲ။ ဆရာဝန်ဆီမှာ ၃လတကြိမ် ရက်ချိန်းနဲ့ သွားသွားထိုးရုံပဲ။ တစ်ခုရှိတာက ထိုးဆေးတွေထိုးတဲ့အချိန်က ရာသီလာနေတဲ့အချိန်ဆိုရင် တန်းပြီး အတူနေလို့ရတယ်… အဲ့လို ရာသီလာချိန်မဟုတ်ပဲ ပုံမှန်အချိန်မှာ ထိုးမိရင်တော့ ပထမတစ်ပတ်မှာ ယောကျာ်းက ကွန်ဒုံးလိုမျိုး အကာအကွယ်သုံးပြီး အတူနေဖို့တော့ လိုတယ်ပေါ့ဟာ…
မူယာ။ ။ အေး အဲ့တာဆိုရင်တော့ ငါနဲ့ကိုက်လောက်မယ်… သူ့မှာ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေ ဘာတွေရော ရှိလား။
ဝေဝေ။ ။ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးအနေနဲ့ကတော့ ရာသီလာတာရပ်သွားတာ၊ သွေးဆင်းနည်းတာတို့တော့ ဖြစ်တတ်ပေမယ့် ငါက ရာသီမလာ အလုပ်ရှုပ်သက်သာတော့ ပိုတောင်ကြိုက်သေးတယ်… တစ်ခုရှိတာက သူက ဟော်မုန်းပါ သားဆက်ခြားထိုးဆေးဆိုတော့ ထိုးဆေးရပ်ပီး ကလေးလိုချင်ရင်တော့ လအနည်းငယ်တော့ စောင့်ရတတ်တယ်။ ဝိတ်တက်တာ ကျတာကတော့ ကိုယ့်ရဲ့ Lifestyle ပေါ်ပဲ မူတည်တယ်။ ဆေးထိုးတာကြောင့်လို့တော့ တထစ်ချပြောလို့မရဘူးပေါ့ဟာ…
မူယာ။ ။ နင်ပြောပြတာတွေက တော်တော်စုံသွားပြီ။ ငါနဲ့လဲ အဆင်ပြေလောက်မယ့် နည်းလမ်းဆိုတော့ အခြေအနေတွေ နည်းနည်းငြိမ်သက်သွားတဲ့အချိန်ကျရင်တော့ ငါ ဆေးခန်းမှာပဲ သွားထိုးလိုက်တော့မယ်… ဪ ဒါနဲ့ မေ့တော့မလို့! နင် သုံးခဲ့တဲ့ ၃ လခံ ထိုးဆေးက ဘာ?
ဝေဝေ။ ။ လေဒီယာရဲ့ အန်ဒလန် (Lydia Andalan) သားဆက်ခြားထိုးဆေး… နင် နာမည်ပြောပြီး ဆေးခန်းမှာ ဒေါက်တာကို ထိုးခိုင်းရုံပဲ။
မူယာ။ ။ ကျေးဇူး မိန်းမရေ… ကပ်ကြီးပြီးရင်တော့ နင်တို့စုံတွဲနဲ့ ငါတို့စုံတွဲ တရက်တွေ့ပြီး Double Date လုပ်ကြမယ်ဟေး…
ပုံမှန်စစ်ဆေး ကျန်းမာရေး (မ)